DPR emechie Filling Station atọ na Makurdi | odumblog
DPR emechie Filling Station atọ na Makurdi
posted on Jul. 13, 2019 at 7:39 pm
Ụlọọrụ Department of Petroleum Resources (DPR) n’ụbọchị Wenezde, emechiela filling station atọ na Makurdi maka igwu wayo. Onyeisi ụlọọrụ a na Murkudi, Mazi Francis Olo kwuru nke a n’ajụjụ ọnụ nke ndi nta akụkọ gbara ya mgbe ha gachara nleghari anya.
Mz. Olo kwuru na ọ bụ oke na ọrụ ụlọọrụ ha ịhụ na ebe a na-ere mmanụ ọkụ na-eso iwu nke e nyere ha. O kwuru na Total Filling Staton nke dị na Kashini Ibrahim Way na Prime Power Resources Nigeria Limited dị na Makurdi/Nake Road bụ ndi amachiri maka na ha anaghi erezu mmanụ ọkụ dịka o kwesiri.
O kwukwara na Conoil bụ ndi ha dọrọ aka na ntị ọtụtụ mgbe maka na ebe ha na-ere ahịa adịghị mma ile anya ma rute ugbu a, o nweghi ihe ha mere maka ya. O kwukwara na ebe Conoil na-ere mmanụ ọkụ ebughi ibu nke ọma; n’agbanyeghi nke a, ha nwere ebe a na-asa ụgbọala n’ime ụlọọrụ ha, ma nwekwa ebe a na-ekpofu ahịhịa. o kwuru na nke a ekwesighi ịdị n’ebe a na-ere mmanụ ọkụ.
Tags:breaking newsDPRDPR shuts down filling stationsIgbo blogIgbo NewsLatest newsnewsNNPCOdumblog
Onuorah Jennifer July 13, 2019
Anyị enweghi atụmatụ ibuli egoọnụ mmanụ ọkụ: NNPC
Gọọmenti etiti ekwuola na ha ga-arụ ọba akwụkwọ na Lokoja